ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး: December 2007
(နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များအတွက် ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း သင်ခန်းစာ များကို နိုင်ငံတော် ပိဋိကတ်တိုက် စာကြည့်တိုက်မှူး ဘဒ္ဒန္တ ပညာသာမိ (မာဂဓီ-သာစည်) ဆရာတော် ပို့ချသော ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း များမှ သင်ခန်းစာများ နှင့် ချမ်းမြေ့ ဆရာတော် ဘုရား ရေးသား ပြုစုသော ယဉ်ကျေး လိမ်မာ သင်စရာ သင်ခန်းစာ များမှ ကောက်နှုတ် ပါသည်။)
တစ်နေ့သ၌ စာရေးသူ၏ကျောင်းသို့ ဒကာမကြီးတစ်ယောက် သူ၏သားနှင့်အတူ ရောက်လာပါသည်။ “အရှင်ဘုရား….တပည့်တော်တို့ ( )ရက်ကျရင် ( )ကျောင်းမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြ မှာပါဘုရား၊ ဒီမှာ တပည့်တော်တို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဖိတ်စာပါ၊ အဆင်ပြေ မပြေ ကြည့်ပေးပါဦးဘုရား ” ဟုပြောပြီး စာရေးသူအား ဆက်ကပ်လာပါသည်။ ထိုဖိတ်စာ၏ မျက် နှာဖုံး ခေါင်းစီးစာတန်း ကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား? မျက်စိကိုပွတ်သပ်၍ မယုံရဲစွာဖြင့် သံသယ၀င်မိပါသည်၊ ဖိတ်စာ၌ “ကွမ်ယင်မယ်တော် အနေကဇာတင်ပွဲ”ဟု ရိုက်နှိပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ထဲမနေနိုင်တာနဲ့ ဒကာမကြီးအား“ ဒကာမကြီးရဲ့ ဖိတ်စာမှာ ဒီစာတန်းထည့်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက အကြံပေးတာလဲ…”ဟု မေးလိုက်မိသည်။
“ ( )ကျောင်းက (ဘာသာခြား) သီလရှင်တစ်ပါး အကြံပေးတဲ့အတိုင်း တပည့်တော် ရေးထားတာပါ၊ ဘာကြောင့်မေးတာလဲ၊ မမှန်ဘူးလားဘုရား၊ ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဘုရား” ၊
စာရေးသူ။ “ပြောရရင်တော့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာမှကိုမလိုအပ်ပါဘူး”
ဒကာမကြီး။ “အမှားပါရင် ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဘုရား”
စာရေးသူ။ “ဒီလိုဆို ပြောရဦးမှာပေါ့” ဟု
ဒကာမကြီးသဘောပေါက်အောင် အနေကဇာတင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်နှင့်ပတ်သက်၍ မကျဉ်းမကျယ် ရှင်းပြခဲ့ရသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ မြတ်ဗုဒ္ဓကလွဲပြီး အဂ္ဂသာဝကမှ အစပြု၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ အနေကဇာတင်သည် မကြားဖူးပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုသာလျှင် သံဃာတော်များက အနေကဇာတင်ကြပါသည်။ (အနေကဇာတင်)ဆိုသည်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အသက်သွင်းသည် ၊ အသက်သွင်းပြီးမှ ကိုးကွယ်ကောင်းသည်ဟု ယူဆဟန်ရှိသဖြင့် ကွမ်ယင်မယ်တော်ကို အနေကဇာတင် ဟန်တူပါသည်။
သေသူကို အသက်သွင်းလျှင် လုံးဝအသက်မရှင်သန်နိုင်သကဲ့သို့ သက်မဲ့တစ်ခုသာဖြစ်သော ထိုကွမ်ယင်မယ်တော် ရုပ်တုကိုလည်း အသက်သွင်း၍ ဘယ်မှာ ရနိုင်ပါအံ့နည်း။
အနေကဇာတင် ဆိုသည်မှာ အသက်သွင်းလိုက်သည်မဟုတ်ပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခါစတွင် ၀မ်းသာကြည်နူး မှုအပြည့်ဖြင့် ရင်တွင်း၌မျိုသိပ်မထားနိုင်တော့ဘဲ…….
အနေကဇာတိသံသာရံ၊ သန္ဓာဝိဿံ အနိဗ္ဗိသံ၊
ဂဟကာရံ ဂဝေသန္တော၊ ဒုက္ခာဇာတိ ပုနပ္ပုနံ။
ဂဟကရက ဒိဋ္ဌောသိ ၊ ပုနဂေဟံ နကာဟသိ၊
သဗ္ဗာတေ ဖါသုကာဘဂ္ဂါ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသင်္ခတံ။
၀ိသင်္ခါရဂတံ စိတ္တံ ၊ တဏှာနံ ခယ မဇ္ဈဂါ။ ဟု ဥဒါန်းကျိူးရင့်ခဲ့ပါသည်။
အဓိပ္ပါယ်ကား…. “ခန္ဓာအိမ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သူအား ရှာခဲ့ပါသော်လည်း ငါသည်လက်သမားကို တွေ့မြင်နိုင်သောဥာဏ် မရ သေးသဖြင့် ဘ၀များစွာ သံသရာပတ်လုံး ကျင်လည်ခဲ့ရ၏ ။ အဖန်ဖန်သော ပဋိသန္ဓေနေရခြင်းကား ဆင်းရဲလှစွာ၏ ။ ခန္ဓာအိမ်ကို ဆောက်သူ သင့်ကို ငါတွေ့မြင်ပြီ၊ ခန္ဓာအိမ်ကို နောက်ထပ် သင် ဆောက်လုပ်ရတော့မည်မဟုတ်။ သင်၏ အခြင်(အရိုး)တို့ကို ငါ ချိုးဖက်ခဲ့ပြီ။ အိမ်ခေါင်ထွတ် (အ၀ိဇ္ဇာ) ကို ငါဖျက်ဆီးခဲ့ပြီ။စိတ်သည် ပြုပြင်ခြင်း ကင်းရာသို့ ရောက်ပြီ။ တဏှာကုန်ရာသို့ ရောက်ပြီ” ဟူ၍ ဖြစ်ူပါသည်။ ယနေ့ခေတ် ဘုရားဆင်းတုတော်ကို မြတ်သောနေရာ၌ သီတင်းသုံးစေတော်မူပြီး၊ သံဃာတော်များက ဘုရားကို အာရုံပြု၍ ဥဒါန်းကျူးရင့်သောဂါထာပါဠိတော်၊ ပဋိစ္စသုမုပ္ပါဒ် အနုလုံ ပဋိလုံ၊ ပဋ္ဌာန်းနှစ်ဆယ့်လေးပစ္စည်း အတိုချူပ် စသည်ဖြင့် ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြခြင်းကို “ အနေကဇာတင်” သည်ဟု ခေါ်ဆိုကြပါ သည်။ အမှန်မှာ ဘုရားကို အသက်သွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားကို အသက်သွင်းပြီးမှ ကိုးကွယ်ကောင်းသည် ဟူသော အယူအဆသည် မှားသောအယူအဆသာ ဖြစ်သည်။ ဆင်းတုတော်ကို အနေကဇာမတင်ဘဲနဲ့လည်း ကိုးကွယ်ကောင်းပါသည်၊“ပုံတော်ကိုဖူး ၊ ဂုဏ်ထူးကိုမျှော်၊ ဖူးမျှော်ခေါ်ရသည်” ဟူသည့်အတိုင်း ပုံတော်(ဆင်းတုတော်) ကို ဖူးမြင်ပြီး ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြု၍ ပူဇော်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိူ့က မည်သည့်အသားနဲ့ထုထားသော ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယလျှင် ခိုက်သည်ဟု ပြောဆိုယူဆနေကြသည်၊ အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် မခိုက်တတ်ပါ။ မခိုက်တတ်သည်သာမက ကိုယ်ကသာ ဘုရားဂုဏ်အာရုံပြုပြီး ကိုးကွယ်ပူဇော်မည်ဆိုပါက အဆင့်အတန်းမြင့်သော ကုသိုလ်တွေရနိုင် ပါသေးသည်။
စာရေးသူက အနေကဇာတင်ခြင်း၏အကြောင်းကို အရိပ်အမြွက်မျှ ပြောပြသောအခါ ဒကာမကြီးက “ အရှင်ဘုရား အခုလို ရှင်းပြ တဲ့အတွက် တပည့်တော်မ သဘောပေါက်သွားပါပြီဘုရား၊ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်ဘုရား” ဟု ပြောလာပါသည်။ အမြင်မှန်ရလာပြီဆိုသဖြင့် စာရေးသူ ပြောပြရကျိုးနပ်၍ ရင်ထဲပီတိ ဖြစ်ရပါသည်။
သို့သော် ထိုပီတိကားသိပ်ကြာကြာ ဖြစ်ခွင့်မရလိုက်ပါ။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နေကဇာတင်သည်ဆိုသော ကွမ်ရင်မယ်တော်ကြီးကား မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ visa (ဗွီဇာ) အပြည့်နှင့် ၀င်ရောက်လာသဖြင့် ၊ အလူမီနီယံ အိမ်ကြီးအတွင်း၌over stay ဟူသည် မရှိဘဲ၊ ရာသက်ပန် နေထိုင်စံမြန်းနေပြီဟု သိလိုက်ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထို ကွမ်ယင်မယ်တော်လို နိုင်ငံခြားသားများသည် မြန်မာပြည်အတွင်း ဘုရားစေတီ၊ကျောင်းကန် နေရာအနံ့အပြား၌ တရားမ၀င်နေရာယူနေကြသည်ကို စာဖတ်သူများပါ တွေ့မြင်ကြပေလိမ့်မည်။ ထိုအတိုင်းသာ တရားမ၀င်နေရာယူပြီး ကိုးကွယ်ခံအဖြစ်ပြုလုပ်ထားကြမည်ဆိုပါက၊ “ ငါတို့လည်း ဒါတွေကို ကိုးကွယ်ကောင်းတယ်” ဟု နောင်လာနောင်သားများ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်မှု၌ မှားသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရင်ပြင်တော်၊ကျောင်းစသည့်နေရာများ၌ တရားမ၀င် နေထိုင်ကြကုန်သော ပြည်တွင်းပြည်ပ မှောင်ခိုရုပ်တုများ ပပျောက်စေရန် ရဟန်းသံဃာတော်များ + ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ+ အာဏာပါဝါရှိသူများ၌ တာဝန်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာ/ဒကာများ အနေဖြင့် တာဝန်သိသိ သစ္စာရှိရှိ သာသနာပြုရန် အထူးလိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ စာရေးစားပွဲပေါ်၌ ရှိသော မင်တံတစ်ချောင်းသည် ကျက်သရေရှိလှပါသည်။ ထိုမင်တံကို အိမ်နောက်ဖေး ထမင်းချက်သည့်နေရာ၌ သွားထားမည်ဆိုလျှင် မင်တံနှင့် ထမင်းချက်သည့်နေရာ လားလားမှ မအပ်စပ်သည့်အတွက် ထမင်းချက်နေရာ၌ ထိုမင်တံသည် အမှိုက်ဖြစ်သွားရပါသည်။” ဟု ဓမ္မကထိကဆရာတော်တစ်ပါး ပြောသည်ကို သတိရမိပါသည်။
၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်ရာကျောင်း၌ စံမြန်းနေသော ထိုမယ်တော်သည် ကျက်သရေ ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသော်လည်း မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ စံမြန်းနေခြင်းမှာမူ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်ကွမ်ရင်မယ်တော်သည် လားလားမှ မအပ်စပ်သည့်အတွက် အမှိုက်ရှုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသာမက ဘုရားရင်ပြင်တော် အတော်များများမှာလည်း မယ်တော်ကြီးသည် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် permanent residence ရသည့်ပမာ နေရာယူနေသည်ကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်နေရပါသည် ။ ထိုကဲ့သို့ ဘုရားစေတီရင်ပြင်တော် အတော်ခပ်များများတွင် ကွမ်ရင်မယ်တော်သာမက သာသနာတော်နှင့်မသင့်လျော် မအပ်စပ်သည့် ဘိုးဘိုးအောင်၊ ဘိုးမင်းခေါင် ၊ သူရဿတီ ၊ အမ်းကုန်း၊ စသော နိုင်ငံခြားသားများသည် ပြည်ဝင်ခွင့် visa (ဗီဇာ)အပြည့်နှင့်ရောက်ရှိလာကာ နေထိုင်ခွင့် permanent residence အပြည့်ဖြင့် နေရာယူနေကြပေသည်။ အစဉ်ထာဝရ နေထိုင်သွားဟန် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားသား လူတွေသော်မှ နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းကုန်လျှင် နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက်ပြန်လည်လျှောက်တင်ရပါသည်။ ထိုတရားမ၀င် မှောင်ခိုကုန်သည်ကြီးများဟုဆိုအပ်သော ထိုရုပ်တုများအဖို့မှာမူ over stay ဆိုတာ လုံးဝမရှိ၊ သက်တမ်း တိုးစရာမလို ဖြစ်နေပါသည်။
ဒီကနေ့ခေတ် သာသနာနှင့်မသင့်လျော်၊ ကိုးကွယ်မှုမှားနိုင်သော ထိုထိုရုပ်တုများသည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ ဘုရားစေတီရင်ပြင်တော်များ၌ နေရာယူနေကြကုန်ပါပြီ်။ ထိုမျှသာမက မြန်မာပြည်၏ အဓိကရ နေရာဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ၊ ဆူးလေစေတီတော် တို့၌လည်း ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဖြင့် နေရာဝင်ယူနေကြပါပြီ။ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါကဲ့သို့ နေရာအနှံ့ ကူးစက်လို့နေပါပြီ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း တရားခံမှာ ထိုရုပ်တုများကို လက်ခံထားသော ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများနှင့် ဘုရားဂေါပကလူကြီးများပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်သာ သာသနာနှင့်မသင့်လျော်သည့် ထိုရုပ်တုများ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားစေတီ၏ တာဝန်ရှိသူ ဘုရားလူကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကြောင့်သာ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ ထိုရုပ်တုများ ရောက်ရှိနေသည်မှာ လွဲမှားနိုင်စရာမရှိပါ။ ထိုကိစ္စမျိုးကို ချေဖျက်ပြီး နောင်မဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ရန်မှာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များ၊ ဘုရားလူကြီးများ၊အာဏာပါဝါရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ၌ တာဝန်ရှိပါသည်။ ဆရာ/ဒကာ ညီညွတ်စွာဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် သာသနာပြုကြမည်ဆိုပါက ထိုဖြစ်ရပ်များ ပပျောက်ပြီး သာသနာထွန်းပြောင်လာနိုင်ပါသည်။
သို့သော်ထိုဖြစ်ရပ်များကြောင့် သာသနာတော်အတွက် ရင်လေးစရာကောင်းသည် မှန်သော်လည်း၊ ယနေ့အချိန်၌ သာသနာအတွက်အားတက်ဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကို မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတစ်နေရာ၌ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က စာရေးသူ တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုနေရာကား မကွေးမြို့ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူးတွင် တည်ထားသော မကွေး မြသလွန်စေတီတော်ကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစေတီတော်ကြီး၏ မုခ်ဦးစောင်းတန်းအ၀င် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွင် -
“ဘုရားရင်ပြင်တော် ပေါ်၌ ရတနာသုံးပါး ပူဇော်ခြင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသည် ၊ ပုံ - ဂေါပက” ဟူ၍ ရေးထားပါသည်။ ရေးထားသည့်အတိုင်းလည်း ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များက လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်။ ဘုရားရင်ပြင်တော်၌ ဂြိုလ်အိမ်ဂြိုလ်ခွင်တွေလည်း လုံးဝမရှိရုံသာမက မည်သည့်နတ်ကွန်းကိုမှလည်းမတွေ့ရပါ။ မြသလွန်စေတီတော်ကြီးနှင့်တစ်ခြား အရံစေတီငယ်များကိုသာ ဖူးမြင်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စိတ်ထဲ၌ လွန်စွာကြည်နူးခဲ့ရပါတော့သည်။ ဤနေရာတွင် သာသနာရေးစိတ်ဓါတ်ရှိကြသော မကွေးမြသလွန်ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ (ထိုဂေါပက အဖွဲ့များလို မြန်မာပြည်အနှံ့ရှိ ဂေါပကအဖွဲ့များ၊ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများ လိုက်နာကျင့်သုံးကြမည်ဆိုလျှင်ကောင်းလေစွ ဟု တွေးမိပါသည်)။
ထိုစဉ်က သတိထားမိသည်မှာ ပြည်ပမှ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသော အမ်းကုန်း၊ ကွမ်ရင်၊သူရဿတီ ပြည်တွင်းမှ ဘိုးဘိုးအောင် ၊ ဘိုးမင်းခေါင်(အောင်မင်းခေါင်)စသော မှောင်ခိုကုန်သည်ကြီးများသည် စေတီရင်ပြင်၌ နေထိုင်ဖို့ရာ ခွင့်ပြုချက်မရသောကြောင့် မကွေးမြသလွန်ဘုရားတည်ရှိရာ နဂုတ္တမတောင်ကြီး၏ အောက်နားလေးတွင် နေရာယူနေကြသည်ကိုလည်း တစ်စေ့တစ်စောင်း မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ဘုရားရင်ပြင်တော်၌သာ မပူဇော်ရဟု အမိန့်ထုတ်ထားသောကြောင့် တောင်ခါးပမ်း၌ သူတို့နေရာ ရသွားခြင်းမှာ အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယနေ့အချိန်၌ စာရေးသူ၏တပည့် မကွေးသူ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ဦး ကို အကူအညီတောင်း၍ မြသလွန်ဘုရားမှ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခိုင်းခဲ့ရာ ဆိုင်းဘုတ်အခြေအနေပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
ရေးထားသည်မှာ “ မြသလွန်စေတီတော်၏ နဂုတ္တမတောင်တော်တွင် ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါး ပူဇော်ခြင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ယခင်က ရင်ပြင်တော်၌သာ နေထိုင်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားပါသော်လည်း၊ ယခုအခါ စာပါသည့်အတိုင်း တောင်တော်တစ်ခုလုံး၌ သူတို့နေရာမရအောင် တားမြစ်ထားလေသလောဟု တွေးတောစရာဖြစ်နေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ မကွေး မြသလွန်ဘုရားစေတီတော်ကြီးသည် သန့်ရှင်းပြီး ထေရ၀ါဒဆန်သော မြန်မာပြည်၏ တစ်ဆူတည်းသောဘုရား ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ (ထေရ၀ါဒဆန်သော ဘုရားစေတီတော်မျိုး တစ်ခြား၌ ရှိသေးသည်ဆိုလျှင် ဖေါ်ပြပေးကြပါရန်)၊
စာရေးသူတို့၏ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် တည်ပြီး တည်ဆဲ တည်လတံ့သော ဘုရားများ၌ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသော ပြည်တွင်းပြည်ပ မှောင်ခိုကုန်သည်ကြီးများ ပပျောက်၍ ၊သန့်ရှင်းပြီး ထေရ၀ါဒဆန်သောဘုရားများ ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၌ ထေရ၀ါဒအသိရှိဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့ ဘာသာရေးအသိများ သိရှိပြီး ကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်ရန်အတွက် ထေရ၀ါဒစစ်စစ်ဖြစ်သော ဘာသာရေးစာပေများကို များများလေ့လာဖတ်ရှုသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတော့သတည်း။ ။
Posted by venkawwida at 3:58 PM No comments:
၀န်းသိုမြို့သို့ရောက်ခိုက် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရောက်ရှိသွားသည်။ သူ့အိမ်၌ ၀န်းသိုမြို့ ကျေးဇူးရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ခန္တီးဆရာတော်ဘုရားကြီး(၁၂၅၆-၁၃၄၈)၏ ပုံတော်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းကို စုံစမ်းကြည့်ရာ အောက်ပါအတိုင်း သိရှိရသည်။
“ကျွန်တော့်အိမ်ဝင်းထဲဂျီ(ချေ)တစ်ကောင်ရောက်လာတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ နယ်အနှံ့ပဲ။ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ တော်တော်လေး အံ့သြသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လူကြီးတွေကို မေးစမ်းကြည့်ရတယ်။ လူကြီးတွေက အိမ်ကလူတွေ သေကြေပျက်စီးတတ်တယ်၊ ရပ်ရွာ မြို့ရွာ ပျက်တတ်တယ် စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။ ပြောကြ၊ ဆိုကြတာ စုံနေတာပဲ။ တစ်ယောက် တစ်မျိုးဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်လည်းဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိတစ်နိုင်ငံလုံးကကြည်ညိုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ ခန္တီးဆရာတော် ဘုရားကြီးကို မေးလျှောက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိလိုက်တယ်။ တိုတိုပြောရရင် ခန္တီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားပင့်တယ်ဗျာ။ ညနေပိုင်း ကြွလာမယ့်အချိန် အမိန့်ရှိတယ်။ ကြွလာတော့ ဆရာတော်ကို အအေးကပ်ပြီး အကျိုးအကြောင်း လျှောက်လိုက်တယ်။ အဆိုးအကောင်းလည်း အမိန့်ရှိပါဘုရား ဆိုပြီးတော့ ဂျီ(ချေ)၀င်တဲ့အကြောင်း လျှောက် ရတာပေါ့။ ပရိတ်တရားတော်ကိုလည်း ချီးမြှင့်ပေးပါတယ်။”
“ဆရာတော်ကတော့ အေးအေးပဲ။ ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲဆိုတော့ “ထန်းသီးကြွေခိုက်၊ ကျီးနင်းခိုက် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝတွေပါ”။ နောက်ပြီး “ရှေးလူကြီးသူမတွေ ပြောဆိုကြတာလဲ ထုံးစံရှိခဲ့လို့ ပြောကြဆိုကြ မှတ်သားထား ကြတာပါ။ မုချဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မဆိုပါဘူး” တဲ့ဗျ။
“သာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်ခိုက်မှာ ရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို မမှိတ်မသုန် ယုံယုံကြည်ကြည် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရင် အန္တရာယ်ကင်းမှာပါပဲ” တဲ့။ “သံသယ မကင်းဘူးထင်ရင် ပရိတ်တရားနာ၊ ပရိတ်ရွတ် လုပ်ရင်လဲ ရပါတယ်” တဲ့ ။ ကျွန်တော့်နားထဲ စွဲသွားတဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ ဂျီ(ချေ)၀င်ရင် လူသေ တတ်တယ်၊ မြို့ရွာပျက်စီးတတ်တယ် ဆိုတာတွေဟာ ဘုရားဟော ဒေသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သြ၀ါဒပါ ပဲ။ ”
ဤကား ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေထံမှ ကြားနာမှတ်သားရသော မြတ်နိုးဖွယ်ရာစကားများဖြစ်ပါ၏။ တော်ပေသေး၏။ အခြားသူတစ်ဦးဦးဆိုလျှင် ဗေဒင်မေး၊ ယတြာချေ စသဖြင့် အလုပ်ရှုပ်သွားနိုင်၏။ အသိဥာဏ်ပညာဦးစီင်္းသော ဘာသာ သာသနာယုံကြည်မှုကြောင့် ၀ိပဿနာထိပ်ခေါင်တင် ကျေးဇူးရှင် ခန္တီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်း ဖူးမြင်လိုက်ရ၏။ ကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်သော တရားကောင်းကိုလည်း နာကြားခွင့် ရလိုက်၏။ သံသယကင်းပြီး ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းဂုဏ်ကိုလည်း ရရှိလိုက်၏။ အဘယ်မျှ မွန်မြတ်ပါသနည်း။
လောကီသားတို့အတွက် လောကီကိစ္စများသည်လည်း မလွဲမသွေ ကြုံကြရ၏။ နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း လောကီ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေကြရဦးမည်သာ ဖြစ်၏။ သို့သော် “တစ်ဆင့်စကား ပြောသံကြားကာမျှဖြင့် မှန်ပြီဟု မယူနှင့်၊ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ဆိုထုံးစကားဖြင့်လည်း မှန်ပြီဟု မယူနှင့်၊ ဤသို့ဖြစ်ဖူး၏ဟူသော ရှေးစကားမျှဖြင့်လည်း မှန်ပြီဟု မယူနှင့်....” စသော (အံ၊-၁၊၁၈၉) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်ကို ထောက်ချင့်၍ တစ်ဖက်သတ် တစ်ယူတန် အစွဲမပြင်းထန်ကြဖို့ လိုပါ၏။
စာရေးသူတို့ငယ်ငယ်က မိဘဘိုးဘွားတို့ ဆုံးမသည်ကို သတိပြုမိပါ၏။ “ဟဲ့ ကောင်လေး၊ ညကြီးမိုးချုပ် လျှောက်မလည်နဲ့၊ သရဲ ကုပ်ချိုးလိမ့်မယ်” စသဖြင့် ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့၏။ အမှန်မှာ ညဉ့်အချိန်မတော် သွားလာ သဖြင့် အပေါင်းအသင်းမှားပြီး ပျက်စီးနိုင်၏။ ညဉ့်မိုက်သဖြင့် အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါများ နင်းမိနိုင်ခြင်း၊ တွင်းကျွံနိုင်ခြင်း စသော ဆိုးပြစ်များစွာရှိ၏။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူတို့အား ဘိုးဘွားမိဘတို့က သတိပေးပြီး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့၏။ ထိုကျေးဇူးကြောင့် မတွေ့ကြုံသင့်သော အမှားများ ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့၏။ ကုပ်ချိုးတတ်သည့် သရဲကိုပင် ကျေးဇူးတင်ရတော့မလိုလို ဖြစ်ရပါ၏။ ထိုနည်းတူ အခြားသော ရှေးရိုးစဉ်လာ စကားများလည်း ရှိပါသေး၏။ ချင့်ချိန်တတ်ဖို့၊ စဉ်းစားတတ်ဖို့ သတိပေး တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ဘုရားကြီး ပဒေသာဆုံးမစာများ (စာ-၃၃)၌ ရေးဖွဲ့ထားသည့်
* ဥာဏ်ဝီရိယ၊ ရှိတုံက၊ ကိစ္စပြီးသည်သာ။
* ဆန္ဒရှိက၊ မှုကိစ္စ၊ ပြီးတတ်ကြသည်သာ။
* စိတ်ဓါတ်ဆောင်က၊ မှုကိစ္စ၊ ပြီးတတ်ကြသည်သာ။
ဟူသည့်အတိုင်း အရာရာ၌ ဥာဏ်ယှဉ်၍ ဆင်ခြင်တတ်သော ပညာရှိဖို့ လို၏။ သို့မှသာ အကျိုးမရှိသော ယုံကြည်စွဲလမ်းမှုများ ပျောက်ကွယ်ပြီး လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော ကောင်းကျိုးများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by လင်းဦး(စိတ်ပညာ) at 8:00 AM 1 comment:
Labels: ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှ ပြုပြင်ဖွယ်ရာများ
များသောအားဖြင့်နေရာတိုင်းလိုလို တန်ခိုးကြီးဘုရားများ (တန်ခိုးကြီးဘုရားဆိုသည်မှာအများ၏ သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။)အကြောင်း စပ်မိစပ်ရာ ပြောဆိုကြလျှင် မည်သည့်ဘုရားမှာ မည်သို့ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သည်၊ မည်သို့ တန်ခိုးပြာဋိပြသည် စသည်ဖြင့် ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်စကားဖြင့် ပြောဆိုနေကြသည်ကို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။
အချို့ဆိုလျှင် မည်သည့်ဘုရားက မျက်နှာတော်ပြုံးနေသည်၊ မည်သည့်ဘုရားက မျက်နှာတော်ညှိုးနေသည် ပြောကြသည်လည်း ရှိကြသေး၏။ ဘုရားရှင်တို့မည်သည် ၀မ်းသာခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း မရှိတော့သဖြင့် ပြုံးခြင်း၊ မဲ့ခြင်းမရှိနိုင်တော့ပါ။ဤသည်မှာသက်တော်ထင်ရှား ဘုရားကို ဆိုလိုပါသည်။ သက်မဲ့ဖြစ်သောရုပ်ပွားတော်များ အားကား မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပြုံးခြင်း၊ မဲ့ခြင်း မဖြစ်နိုင်ပေ။ ပန်းပု၊ပန်းရံဆရာ လုပ်ထားစဉ်ကအတိုင်းသာ တည်ရှိ နေပေလိမ့်မည်။
စင်စစ် သက်ရှိထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည် အကြောင်းမဲ့သက်သက် ရောင်ခြည်တော်လွှတ်ခြင်း စသော တန်ခိုးပြာဋိဟာများကို ပြတော်မမူကြပါ။ သတ္တ၀ါဝေနေယျများ အကျိုးရှိမှသာ ပြတော်မူတော်မူကြပါသည်။ တပည့်သံဃာတော်များကိုလည်းလာဘ်ပေါရန်၊လူအများကြီးညိုလေးစားအထင်ကြီးစေရန်စသောအကြောင်းကို လိုလား၍ တန်ခိုးမပြရကြောင်းကို ၀ိနည်းစည်းကမ်းဒေသနာတော်ဖြင့် ပညတ်တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်သည်ပင်လျှင် အကြောင်းမဲ့ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်ခြင်း၊ တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြခြင်းကို မလိုလားသော် သက်မဲ့ဖြစ်သော စေတီဘုရားက (၀ါ) ဘုရားကိုယ်စား တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့် စေတီဘုရားက ရောင်ခြည်တော်လွှတ်ခြင်းစသောတန်ခိုးပြာဋိဟာ အလိုလို ပြနိုင်ပါမည်လား စဉ်းစားသင့် ကြ၏။
အမှန်မှာ “စကား”ဆိုသည့်အတိုင်း စ,ကား လာကာ တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ နည်းနည်းမှ အများကြီးကားထွက်သွား ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပုဂံခေတ်က စကောချပ်လေလွင့်ပါသဖြင့် “စကောချပ်ကြီးပါပြီ” ဆိုသည်ကို “စကော တပ်ကြီး ချီလာပြီ”မျိုး ဖြစ်သည်က များပါသည်။ စေတီတော်များ၌ တန်းခိုးပြခြင်းက နည်းပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် မန္တလေး နေပြည်တော်ကြီး စတင်တည်ထောင်တော်မူသည့် မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက်က မဟာ မြတ်မုနိဘုရား ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သည်ဟု ပြောကြပြီး ပျံ့နှံ့သွားကာ ဟိုကလာ၊ သည်ကလာနှင့် ဘုရားကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုလိုခြင်းထက် အထူးအဆန်းကို ကြည့်လိုသူတွေက များနေကြလေသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် စေတီတော်များ တန်ခိုးပြာဋိဟာ မပြတော်မူပြီလောဟု မေးစရာရှိ၏။ စေတီတော်တိုင်း တန်ခိုး မပြတော့ မဟုတ်ပါ။ အချို့စေတီများ တန်ခိုးပြကြောင်းကို မိလိန္ဒပဥှာ၌ ဆိုထားပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မိလိန္ဒပဥှာမင်းကြီးက အရှင်နာဂသေနအား မေးလျှောက်ချက်ရှိပါသည်။ ယင်းကို အောက်ပါ အတိုင်းရှု့ပါ။
မိလိန္ဒမင်းကြီးက “အရှင် နာဂသေနဘုရား၊ အားလုံးသော ဘုရားရှင်တို့၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြပါသလား ဘုရား” ဟု မေးလျှောက်၏။
အရှင်မြတ်က“ မင်းကြီး၊ အချို့စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြ၍ အချို့စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာ မပြပေ” ဟု ဖြေတော်မူ၏။
မင်းကြီးက“ ဘယ်လိုစေတီမျိုး၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြ၍ ဘယ်လိုစေတီမျိုး၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာ မပြပါသနည်း”ဟု မေး လျှောက်ပြန်၏။
အရှင်မြတ်က“ မင်းကြီး ရဟန္တာတစ်ပါးပါးက လည်းကောင်း၊ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များကသော်လည်းကောင်း၊ သဒ္ဓါထက်သန်သည့် သီလရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း အဓိဌာန်ပြုလျှင် ဘုရားရှင်တို့၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြသည်”ဟု ဖြေတော်မူ၏။
မင်းကြီးက“ ဘယ်လိုအဓိဋ္ဌာန်ခြင်းပြု၍ တန်ခိုးပြပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။
အရှင်မြတ်က“ရဟန္တာတစ်ပါးပါးသည် လူနတ်တို့ကို အစဉ်သနားတော်မူသဖြင့် ရပ်တည်တော်မူလျက် “ဤမည် သော တန်ခိုးပြာဋိဟာသည် ဤစေတီ၌ ပြစေသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့က လူအများကို အစဉ်သနားသဖြင့် “စေတီ၌ ဤတန်ခိုးပြာဋိဟာဖြင့် သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟူသော သာသနာတော်သည် အမြဲချီးမြှောက်အပ်သည် ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူအများကြည်ညိုသဒ္ဒါကြီးမား ကုသိုလ်တရား၊ တိုးပွားလိမ့်မည်”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသော (အမျိုးကောင်းသား၊ အမျိုးကောင်းသမီး) ပညာရှိသည် ပန်းနံ့သာ၊ အ၀တ်ပုဆိုးစသော လှူဖွယ်ဝတ္ထုကို တင်မြှောက်၍ “ဤစေတီမှ တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြပါစေသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုလျှင်ဖြစ်စေ ဘုရားရှင်တို့၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြာဋိဟာ ပြ သည်။ ထိုသို့ အဓိဋ္ဌာန်မပြုလျှင် တန်ခိုးမပြပါ။ ထို့ပြင် ရဟန္တာတို့၏ စေတီ၌လည်း တန်ခိုးပြခြင်းမရှိပါ” ဟု ဖြေတော်မူပါသည်။
မိလိန္ဒပဥှာအတိုင်း ရဟန္တာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ နတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဘုရားရှင်၏ စေတီတော်၌ တန်ခိုးပြခဲ့သော် ထိုစေတီတော်သို့သွား၍ တန်ခိုးကြီးသောဘုရား၊ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သောဘုရားဟု မိမိ၏ကြီးပွားရေး၊ ရာထူးတက်ရေး၊ ကျော်စောထင်ရှားရေး စသည်ကို ရည်မှန်းပြီး ရှိခိုးဖူးမြော်ခြင်း၊ လှူဒါန်း ပူဇော်ခြင်း “တစ်ဘ၀”ကောင်းစားရေးအတွက်မျှလောက်ဆိုလျှင် အကျိုးမများလှပေ။ အကြောင်းမှာ မိမိ ကိုယ်ကျိုး မျှော်ကိုးလုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤအတိုင်း မှန်မမှန် လေ့လာကြည့်ပါ။ အချို့သူများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မည်သည့်ဘုရားက တန်ခိုးကြီး သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ဆုတောင်းပြည့်သည်၊ မည်သည့် ဘုရားသွားဖူးလျှင် မည်သည့်အလိုဆန္ဒ ပြည့်ဝသည် စသဖြင့် ယုံကြည်မှုများနေကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ယုံကြည်သည့်အတိုင်းလည်း သွားရောက်ဖူးမြော် လှူဒါန်းနေကြသည်။ ဘုရားရှင်၏ ရုပ်ပုံတော်ထက် ဂုဏ်တော် ကို အာရုံပြုရမည်ကို မေ့လျော့နေကြသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ရှေးပညာရှိကြီးများက ဘုရားအစစ်ကို ရုပ်တုမကွယ်စေနှင့်ဟု ဆုံးမသြ၀ါဒစကား မှာကြား ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ ဘုရားရှင်ကို တကယ်ကြည်ညိုသည်ဆိုလျှင်လည်း တန်ခိုးကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ မကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်ခြည်တော် လွှတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလွှတ်သည်ဖြစ်စေ အဓိကမဟုတ်ပါ။
“တိဋ္ဌန္တေ နိဗ္ဗူတေစာပိ သမေစိတ္တေ သမံဖလံ” (၀ိမာန၀တ္ထု)
ဆိုသည့်အတိုင်း သက်တော်ထင်ရှား မြတ်ဘုရား၌ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားထားခဲ့သည့် သက်မဲ့ရုပ်တု စသော စေတီ ဘုရား၌ဖြစ်စေ ၊ စိတ်တူမျှစွာ လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းပြုပါက အကျိုးတူပေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် တန်ခိုးကြီးဘုရား၊ ရောင်ခြည်တော်လွှတ်သောဘုရားဟု အဓိက မရည်ရွယ်ဘဲ မိမိတို့ကိုးကွယ် ပူဇော်ထားသည့် အိမ်ဦးခန်းက ဘုရားကိုလည်း သက်တော်ထင်ရှားဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် လှူဒါန်း ပူဇော်လျှင်လည်း အကျိုးကြီးမားမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ပုံတော်ကို ဂုဏ်တော်လွှမ်း၍ ကြည်ညိုနိုင်ကြပါစေသတည်း။
Posted by လင်းဦး(စိတ်ပညာ) at 4:12 AM No comments:
Labels: တန်ခိုးပြခြင်းသည် အဓိကမဟုတ်ပါ
ငါးပါးသီလ ကံမြောက်ကြောင်း အချက်များနဲ့ ကျူးလွန် ခြင်းကြောင့် ရမည့် အပြစ်များ
ခေတ္တ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိသော ဘလော့ဖတ် ပရိသတ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ဇော်မင်းက ငါးပါးသီလ ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန် ရာတွင် ကံမြောက်ခြင်း အကြောင်းများ၊ စောင့်ထိန်းရခြင်း နဲ့ မစောင့်ထိန်းရင် ကျူးလွန်သူ ခံစား ရမည့် ကံများကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း တိတိကျကျ သိလို သဖြင့် ရေးသား ဖော်ပြရန် တောင်းဆို ဖူးသောကြောင့် လည်းကောင်း ဘလော့ဖတ် ပရိသတ်လဲ မသိ သေးရင် သိရအောင် သိပြီး ဖြစ်လျှင်လည်း ထပ်မံ သတိရ သံဝေဂ ပွားများ နိုင်အောင် တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပါဏာတိပါတ အင်္ဂါ ၅-ပါး။ -သတ်မှုကံမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းငါးပါး၊ ၎င်းင်းအင်္ဂါ ၅-ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံက ထိုသိက္ခာပုဒ် ပျက်၏။
(၁) ပါဏ- သက်ရှိသတ္တ၀ါဖြစ်ခြင်း၊
(၂) ပါဏသညိတ-သက်ရှိသတ္တ၀ါဟု မှတ်သိခြင်း၊
(၃) ဃာတ စိတ္တ- သတ်လိုသောစိတ်ရှိခြင်း၊
(၅) မရဏ-ထိုလုံ့လကြောင့် သေခြင်း။
ပါဏာတိပါတ၏ ပယောဂမျိုး ၈-ပါး။ ။ပါဏာတိပါတကံ ဖြစ်နိုင် ခြင်း၏ အကြောင်း တရားမျိုး ရှစ်ပါး၊ ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာမှ။
(၁) ဥဒိဿ ပယောဂ- သတ္တ၀ါကိုရည်မှတ်၍ သတ်ဖြတ် ထိုးခုတ်ခြင်း၊
(၂) အနုဒ္ဒိဿ ပယောဂ-သတ္တ၀ါတစုံတခုကို ရည်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဘာကောင်သေသေဟု ပစ်ခတ် ထိုးခုတ်လိုက်ခြင်းမျိုး၊
(၃) သာဟတ္ထိက ပယောဂ-ကိုယ်တိုင် သတ်ပုတ် ထိုးခုတ်ခြင်း၊
(၄) အာဏတ္တိက ပယောဂ- သူတပါးကို စေခိုင်းခြင်း၊
(၅) နိဿဂ္ဂိယ ပယောဂ-အဝေး၌နေသော သတ္တ၀ါကို မြှား လှံ သေနတ် စသည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊
(၆) ထာဝရ ပယောဂ- အမြဲတည်နေ၍ သေစေနိုင်သည့် တွင်းတူးထားခြင်းç ဆေးဝါး အစီအရင် ထားခြင်း စသည့် အရာမျိုး၊
(၇) ၀ိဇ္ဇာမယ ပယောဂ- ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင် ဂါထာမန္တရား စသော အစီ အရင်တို့ဖြင့် သေအောင်လုပ်ခြင်း၊ (၈) ဣဒ္ဓိမယ ပယောဂ- မိမိ ကမ္မဇိဒ္ဓိ တန်ခိုးဖြင့် သတ္တ၀ါတို့ကို သေစေခြင်း။
ပါဏာတိပါတကံ၏ မကောင်းကျိုး ၂၃-မျိုး။ ။ပါဏာတိပါတ် သူ့သက်သတ်သူတို့ ခံစားတွေ့ကြုံ ရသော မကောင်းကျိုးများသည် ပိဋကပါဠိတော်တို့၌ သင်္ချာ အမျိုးမျိုး ဖြင့် လာရှိ သော်လည်း ဤ၌ အလုံးစုံပါဝင်သည့် ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌ ကထာ လာ သင်္ချာ ၂၃-ပါးကို ဆိုလေသည်၊ သိလွယ်နိုင်ရန် မြန်မာ ဘာသာ သက်သက်ဖြင့် ပြလိုက်၏။
(၂) လုံးရပ်နေထား အချိုးအစား မကျခြင်း၊
(၄) ခြေç လက်ç ဖ၀ါးçမညီခြင်း၊
(၅) မလှပ မတင့်တယ်ခြင်း၊
(၆) အရေ အဆင်း မပြောင်ဝင်းခြင်း၊
(၉) ခွန်အားဗလ မရှိခြင်း၊
(၁၀) စကားပြေပြစ်စွာ မပြောတတ်ခြင်း၊
(၁၁) ချစ်ခင်သူ မရှိခြင်း၊
(၁၂) မိမိပရိသတ် အကြိမ်ကြိမ် ပျက်စီးခြင်း၊
(၁၄) လက်နက် အဆိပ်ဘေး သင့်တတ်ခြင်း၊
(၁၅) သူများ ပယောဂကြောင့်သေရခြင်း၊
(၁၇) ခြွေရံပရိသတ် နည်းပါးခြင်း၊
(၁၉) ကုန်းကော့သော ကိုယ်ရှိခြင်း၊
(၂၀) ကြောင့်ကြ စိုးရိမ်မှုများခြင်း၊
(၂၁) ဘေးရန် များခြင်း၊
(၂၂) ချစ်ခင်သော သားသမီးတို့နှင့် ကွေကွင်းရခြင်း၊
အဒိန္နာဒါနာ အင်္ဂါ ၅-ပါး။ ။ ခိုးမှုကံမြောက်အင်္ဂါ ၅-ပါး။
(၁) ပရသန္တက - သူတစ်ပါးဥစ္စာဖြစ်ခြင်း၊
(၂) တထာသညာ - သူတစ်ပါးဥစ္စာဟုမှတ်ထင်ခြင်း၊
(၃) ထေယျစိတ္တ - ခိုးလိုသောစိတ်ရှိခြင်း၊
(၄) ဥပက္ကမ - ခိုးရန်လုံ့လပြုခြင်း၊
(၅) တေနဟာရ - ထိုလုံ့လဖြင့် ခိုးခြင်း။
ခိုးခြင်း ၂၅-ပါး။ ။ ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် ၆၅။ ဋ္ဌ။ ပ-အုပ်။ ၂၆၃- ၃၃၀- ၃၃၁- ၃၃၂ တို့၌ အကျယ်ရှု။ ရဟန်း တော်များ အတွက် ပါရာဇိကဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ အဒိန္နာဒါန် သိက္ခာပုဒ်၏ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက် ၂၅-ပါး။
(၁) နာနာဘဏ္ဍ ပဉ္စကခေါ် ပိုင်ရှင်မပေးသော သက်ရှိသက်မဲ့ ပစ္စည်းဘဏ္ဍာ အမျိုးမျိုးတို့ကို အောက်ပါနည်း ငါးပါးဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(က) အာဒိနယ- ကျောင်း အိမ် မြေ ခြံစသည်တို့ကို လိမ်ညာသောနည်းဖြင့် တရားဆင်ကာ စွဲဆိုခိုးယူခြင်း မျိုး၊ ပိုင်ရှင်က စိတ်လျော့ ၀န်ချ လိုက်လျှင် ပါရာဇိက၊
(ခ) ဟရဏ-သည်ပိုးထမ်းဆောင်လာသော သူ့ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဥစ္စာ ဖြစ်အောင် ပြောဆို စွပ်စွဲ၍ ထမ်းဆောင် လာသော သူ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျစေလျက် ခိုးယူ ခြင်းမျိုး၊ သူ့ကိုယ် ပေါ်မှ ချလိုက်သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဂ) အ၀ဟရဏ-သူတစ်ပါးခေတ္တအပ်နှံထားသော သူပိုင်ဥစ္စာဘဏ္ဍာကို မအပ်ပါဟူ၍လည်းကောင်း ငါ့ဥစ္စာ ဖြစ်သည် ငါ့ဟာ ပြန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဟုလည်းကောင်း၊ လိမ်ညာ ပြောဆိုလျက် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ပိုင်ရှင် စိတ်လျှော့ ၀န်ချသည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဃ) ဣရိယာပထ၀ိကောပန- ထမ်းပိုးဆောင်ရွက် လာ သော သူတစ်ပါး ဥစ္စာကို ထမ်းဆောင် လာသူ နှင့်တကွ ထမ်းလာသည့် ဥစ္စာ ကိုပါ ခိုးယူ အံ့သော အကြံဖြင့် ပစ္စည်းရော လူပါ ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ပိုင်ရှင် စိတ်လျှော့ပြီး ဒုတိယ ခြေလှမ်းကြွ သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(င) ဌာနာစ၀န- သူချထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူ လိုစိတ်ဖြင့် မူလနေရာမှ ရွေ့အောင် ကြွအောင်လုပ်ခြင်း မျိုး၊ ရွေ့သည် ကြွသည်နှင့် ပါရာဇိက ကျတော့၏၊ နာနာဘဏ္ဍပဉ္စကပြီး၏။
(၂) ဧကဘဏ္ဍ ပဉ္စက- ဤ၌ သက်ရှိ သ၀ိညာဏကဖြစ်သော ဘဏ္ဍာကိုသာ ယူရသည်၊ ခိုးယူခြင်းနည်း ငါးပါးမှာ နာနာဘဏ္ဍပဉ္စကအတိုင်း အာဒိနယ ဟရဏ အ၀ဟရဏ ဣရိယာပထ ၀ိကောပန ဌာနာစ၀န နည်းတို့ဖြင့် အတူတူပင်မှတ်လေ၊ ဧကဘဏ္ဍ ပဉ္စကပြီး၏။
(၃) သာဟတ္ထိက ပဉ္စက- ဤ၌ သက်မဲ့ဖြစ်သော အ၀ိညာဏကပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်မပေးပဲ အောက်ပါငါးနည်း ဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(က) သာဟတ္ထိက မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(ခ) အာဏတ္ထိက-ဤသူ၏ဘဏ္ဍာကို သွားခိုးချေဟုစေခိုင်းခြင်းမျိုး၊
(ဂ) နိဿဂ္ဂိယ- ကင်းခွန် အကောက်တော်စသည် မပေးရအောင် ဤဖက်နယ်ခြားမှ ထိုဖက်နယ်မြေသို့ ကျအောင် ပစ္စည်းဥစ္စာကို ပစ်သွင်း၍ သို့မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြင့် ကြံဆ၍ ခိုးယူသွားခြင်းမျိုး၊
(ဃ) အတ္ထ သာဓက- ထိုသူ၏ဘဏ္ဍာကို အခွင့်သာတဲ့အခါ စွမ်းနိုင်တဲ့ အခါကို စောင့်ပြီး ခိုးယူ လိုက်ရ မည်ဟု စေခိုင်း ထားလျက် ခိုးယူ စေခြင်းမျိုး၊
(င) ဓုရ နိက္ခေပတရား၌စွဲ၍ယူခြင်း လိမ်ညာလှည့်ပတ်၍ယူခြင်း၌ ဥစ္စာပိုင်ရှင်က ငါတော့ရှုံးပါပြီ၊ ငါ့ဥစ္စာတော့မရတော့ ပါဘူးဟု ၀န်ချလိုက်ခြင်းမျိုး၊ သာဟတ္ထိက ပဉ္စက ပြီး၏။
(၄) ပုဗ္ဗ ပယောဂ ပဉ္စက- အရှင်မပေးသော ပစ္စည်းဘဏ္ဍာကို အောက်ပါနည်း ငါးမျိုးဖြင့် ခိုးယူခြင်း။
(က) ပုဗ္ဗ ပယောဂ- ၎င်းင်းခိုးနည်းကား အာဏတ္ထိကနှင့် သဘောတူဖြစ်၏၊
(ခ) သဟပယောဂ-လယ်မြေ ခြံမြေစသည်ကို နယ်ခြား မှတ်တိုင်ငုတ် စသည်ကို နုတ်၍ ရွှေ့ပြောင်း စိုက်နှက် ခိုးယူခြင်း၊
(ဂ) သံဝိဓါ ၀ဟာရ- အချင်းချင်း စုပေါင်းတိုင်ပင်၍ ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ တိုင်ပင်စဉ် အခါက သဘောတူ ပါသူသည် ခိုးရာ၌ ပါပါ မပါပါ ပါရာဇိက၊
(ဃ) သင်္ကေတ ကမ္မ- အချိန်ကာလ နာရီအပိုင်းအခြား မှတ်သား ချိန်းချက် လျက် ဤမည်သော ဘဏ္ဍာကို ခိုးယူတော့ဟု ခိုးခိုင်း ခြင်းမျိုး၊ သူပေးသော အချိန်နှင့် ပစ္စည်း အတိုင်း ခိုးယူသော် ပါရာဇိက၊
(င) နိမိတ္တကမ္မ- မျက်စိမှိတ်ခြင်း၊ လက်မြှောက်ခြင်းစသော အမှတ် နိမိတ် သညာ တစ်ခုခု ထား၍ ခိုးခိုင်းခြင်း မျိုး၊ နိမိတ် ပြုလိုက် သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ခိုးငြားအံ့ နိမိတ် ပြသူ ပါရာဇိက၊ ပုဗ္ဗပယောဂပဉ္စက ပြီး၏။
(၅) ထေယျာ ၀ဟာရ ပဉ္စက- ပိုင်ရှင်မပေးသော ပစ္စည်းဘဏ္ဍာကို အောက်ပါ နည်း ငါးမျိုးဖြင့် ခိုးယူ ခြင်းမျိုး။ (က) ထေယျာ ၀ဟာရ- နံရံစသည် ဖေါက်ထွင်း ဖွင့်ဖြဲ၍ ခိုးခြင်း၊ တောင်းတင်း ချိန် အလေးစသည်တို့ကို စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ်၍ ခိုးယူ ခြင်းမျိုး၊
(ခ) ပသယှာဝဟာရ- နိုင်ထက် စီးနင်း ပြု၍ ယူခြင်း၊ ဓါးပြတိုက် ယူခြင်း၊ ပုန်ကန် ထကြွ၍ ယူခြင်း၊ မင်းစိုးရာဇာ တို့သည် ရသင့်သော အခွင့်ထက် အာဏာ ပြ၍ ပိုမို ကောက်ခံ ခြင်းမျိုး၊
(ဂ) ပရိကပ္ပါဝဟာရ- ဤ၌
၁- ဘဏ္ဍာပရိကပ္ပခေါ် အထည်အလိပ်ကိုသာ ယူအံ့ဟူကြံစည်လျက် အခန်း တွင်းသို့ ၀င်သွားပြီး မှောင်ထဲ၌ အထုပ်ကြီးကိုထမ်းယူလာလျက် ကြည့်သော အခါ အထည် မဟုတ်ဘဲ ချည်ခင် တွေဖြစ် နေပါအံ့ ပါရာဇိက မကျ၊ အထည်လိပ် ဖြစ်နေ ပါက ပါရာဇိကကျ၏။
၂- သြကာသပရိကပ္ပခေါ်အရပ်ဖြင့် ပိုင်းခြား ကြံစည်၍ ခိုးခြင်းကား ဤခြံဝင်း အတွင်း၌ ငါ့ကို တွေ့မြင် ပါမူ ဤပစ္စည်း ဥစ္စာကို ဤခြံဝင်း အတွင်း၌ လှည့်လည်ရင်း ကြည့်ရှုရန် ကိုင်လာ သယောင် ဆောင်၍ ပြန်ပေး လိုက်အံ့၊
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက် နှင့်မှ မတွေ့ရပါမူ ခိုးယူ သွားအံ့ ဟူသော အကြံဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ အပိုင်းအခြား လွန်သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဃ) ပဋိ စ္ဆန္နာဝဟာရ- ပန်းခြံ ရေချိုးဆိပ်စသည်တို့၌ သူတစ်ပါး ချွတ်ချ ထားသော ဘဏ္ဍာကို ခိုးလိုစိတ်နှင့် နောက်မှ ယူအံ့ဟု ကြံလျက် မြေမှုန့် မြက်မှိုက် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ခိုးယူခြင်းမျိုး၊
(င) ကုသာ ၀ဟာရ- မဲလိပ် စာရေးတံစသည်တို့ကို မိမိသို့ အကောင်း ရရန် ကြံစည်လျက် တစ်စုံတစ်ခုသော နည်းပရိယာယ်ဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ထေယျာ ၀ဟာရ ပဉ္စကပြီး၏။
ခိုးခြင်း ပယောဂမျိုး ၆-ပါး။ ။ (၁) သ ဟတ္ထိက- ကိုယ်တိုင်ခိုးခြင်း၊ (၂) အာဏတ္တိက စေခိုင်း၍ ခိုးခြင်း၊ (၃) နိသဂ္ဂိက- နေရာရွှေ့ပြောင်းပစ်လွှင့်ခိုးခြင်း၊ (၄) ထာဝရ- တင်းတောင်း လိမ် ချိန်လိမ်စသည်ပြု၍ခိုးခြင်း၊ (၅) ၀ိဇ္ဇာမယ- အမေ့ အဟန့်စသော အတတ်ပညာဖြင့်ခိုးခြင်း၊ (၆) ဣဒ္ဓိမယ- တန်ခိုးဖြင့် ခိုးခြင်း။
ခိုးသူကြီးတို့ လိုက်နာ စောင့်ထိန်းအပ်သော အင်္ဂါ ၈-ပါး။ ။ဤအင်္ဂါရှစ်ပါးကို စောင့်ထိန်းသော ခိုးသား ကြီးများသည် ရက်-လ-နှစ်ရှည်- တည်တံ့နိုင်သည်၊ ဤအင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် မပြည့်စုံသောခိုးသား ဓားပြတို့ကား- ရက်-လရှည်မတည်၊ လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးတတ်သည်ဟု အင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်တတိယအုပ်- (၁၅၃)၌ ဟောတော်မူသည်။
(၁) မိမိ၏ ရန်သူမဟုတ်သည့် အသက်အရွယ်ကြီးသူç ကလေးသူငယ်ç အကျင့်သီလဂုဏ် ရှိသူçတို့ကိုရိုက်နှက် ပုတ်ခတ်မှု မပြခြင်း၊
(၂) ပစ္စည်းဥစ္စာကို အကုန်မယူခြင်း၊
(၃) မိန်းမကို မသတ်ခြင်း၊
(၄) အမျိုးသမီးတို့ကို မဖျက်ဆီးခြင်း၊
(၅) ရှင် ရဟန်းတို့ကို မလုရက်ခြင်း၊
(၆) မင်းဘဏ္ဍာတိုက်ကို မလုရက်ခြင်း၊
(၇) ရွာ-နိဂုံးမင်းနေပြည်အနီး၌ မလုရက် မတိုက်ခိုက်ခြင်း။
သူခိုး ဒါးပြ သူပုန်တို့၏ မှီခိုအားထားရာကြီး ၅-ပါး။ ။ လူသားတို့ငြိမ်းဧချမ်းသာမှု အတွက် တိုင်းပြည် မြို့ရွာ နယ်ပယ် အုပ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းကြသော မင်းစိုးရာဇာတို့ သိထားရန်။ အင်္ဂုတ္တရ ။ပါ။ ဒု-အုပ်။ ၁၁၃-၌အကျယ်ရှုပါ။
(၁) အသွားအလာ ခက်သည့် ရေလယ်ကျွန်း၊ တောင်ကြားချောက်ကြား၊ ရှို-မြောင် မညီညွတ်သော ခရီးခက်အရပ်ကို မှီနေတတ်ကြသည်၊
(၂) ထူထပ်သည့် ကိုင်းတော ကျူတော၊ ပင်ချင်း ယှက်သည့် တောအုပ်ကြီး စသည့် အရပ်မျိုး၊
(၃) တစုံတယောက်က ဖေါ်ပြောလျှင် မင်းအမတ် မှုထမ်း ရာထမ်းတို့က အပြစ်ကို ကာကွယ်ဖုံးအုပ် ပေးရန် ၎င်းတို့နှင့် ကြိုတင်၍ အကျွမ်းတ၀င် အမှီတံကဲ ပြုလုပ်ထားခြင်း၊
(၄) မိမိတို့အပြစ်ကို ဖေါ်ပြောထုတ်ဆိုမည့်သူများအား နှုတ်ပိတ်ခ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပေးကမ်းရန်၊
(၅) မိမိတို့၏ လျှို့ဝှက်တိုင်ပင်မှု မပေါက်ကြား စေရန် အထူး လုံခြုံသော နည်းလမ်း ဥပါယ်တို့ ဖြစ်၏။
အဒိန္နဒါန်၊ ပြစ်မျိုးကံ၊ ထည့်ပြန် ၁၂-ပါး။ ။ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးဝှက်တိုက်ခိုက်သူတို့ ရရှိခံစားမှု အပြစ်မျိုး ဆယ့်နှစ်ပါး။ (ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌကထာမှ)
(၁) မြတ်သောဥစ္စာမျိုး မရရှိခြင်း၊
(၆) ရရှိပြီးစည်းစိမ်များ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်း၊
(၈) ရန်သူမျိုးငါးပါးနှင့်သာ ဆက်ဆံတွေ့ကြုံရခြင်း၊
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ အင်္ဂ ၄-ပါး။ ။ ကာမကိစ္စ၌ ကံမြောက်နိုင်သည့်အင်္ဂါလေးပါး။
(၁) အ ဂမနိယ ၀တ္ထု ၂၀-တို့တွင်ပါဝင်ခြင်း၊
(၂) ကျင့်ပြု မှီဝဲလိုစိတ်ရှိခြင်း၊
(၃) ရနိုင်သောနည်းဖြင့် လုံ့လလည်းပြုခြင်း၊
(၄) ပြုကျင့်ခြင်းကိုလည်း သာယာခြင်း။
ကာမေသုကံ၊ ကျိုးပြစ်ဒ်ဒဏ်၊ ထိမိမှန် ၁၅-ပါး။ ။ သူ့သားမယား၌ သွားလာ လွန်ကျူး သူတို့ ရရှိသော မကောင်းကျိုးအပြစ်ဆယ့်ငါးပါးဟူ၏။ ထိုထို ကျမ်းစာ တို့၌ အမျိုးမျိုး လာရှိသည်။
(၁) အပါယ် ၄-ပါးသို့လားရခြင်း၊
(၂) မိန်းမ ပဏ္ဍုက်ဖြစ်ရခြင်း၊
(၄) လူအများ မုန်းခြင်း၊
(၅) စား ၀တ် အိပ်ယာရခဲခြင်း၊
(၆) ဆင်းဆင်းရဲရဲ အိပ်ရ နိုးရခြင်း၊
(၈) လောကုတ္တရာတရား မရရှိနိုင်ခြင်း၊
(၉) စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျက်ပြုန်းရခြင်း၊
(၁၀) ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့ခံရခြင်း၊
(၁၃) ချစ်သူတို့နှင့် ခွဲနေရခြင်း၊
အုပ်ထိန်းသူ ရှိသော မိန်းမ ၂၀။ ။ အုပ်ထိန်းခြင်းရှိသဖြင့် ယောက်ျားတို့ မသွားလာ အပ်သော မိန်းမ ၂၀-ဟူလို။
(၁) မာတု ရက္ခိတ- အမိအုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
(၂) ပိတု ရက္ခိတ- အဘအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၃) မာတာပိတု ရက္ခိတ- မိဘ ၂-ပါးအုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
(၄) ဘာတုရက္ခိတ- မောင်ကြီးမောင်ငယ် အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၅) ဘဂိနိ ရက္ခိတ- အစ်မကြီး အစ်မငယ်အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၆) Óတိ ရက္ခိတ- ဆွေမျိုးအုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၇) ဂေါတ္တရက္ခိတ- အနွယ်တူ အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၈) ဓမ္မရက္ခိတ- သီတင်းသုံးဖေါ်စောင့်ရှောက်အုပ်ထိန်းသေမိန်းမ။
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်း ၈-ယောက်သောမိန်းမတို့ကား သူတို့မှာ ကံမထိုက်၊ သွားလာ လွန်ကျူးသူ ယောက်ျားများ မှာသာ ကံထိုက်သည် ဟူ၏။
(၉) သာရက္ခာ- ထိမ်းမြားကြောင်းလမ်းပြီးသူ ]လက်ထပ်ပြီးသူ} လင်အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၁၀) သ ပရိဒဏ္ဍာ- မင်းတို့ကောက်ယူရန်သတ်မှတ်လျက် ဒဏ်ထားပြီးလျှင် အုပ်ထိန်းသောမိန်းမ၊
(၁၁) ဓနက္ကီတာ- ဥစ္စာဖြင့်ဝယ်ယူလျက် မယားအဖြစ်ထားသောမိန်းမ၊
(၁၂) ဆန္ဒ ၀ါသိနီသဘောတူအလိုတူ၍ ညားနေသောမိန်းမ၊
(၁၃) ဘောဂ ၀ါသိနီ- စည်းစိမ်ပေး၍ ပေါင်းဖေါ်သောမိန်းမ၊
(၁၄) ပဋ၀ါသိနီ- ပုဆိုးပေး၍ ပုဆိုး တန်းတင် ပြု၍ နေသော မိန်းမ၊
(၁၅) သြဒ ပတ္တကိနီရေခွက်၌ လက်ဆုံချ၍မိဘနှစ်ပါး ထိန်းမြားပေးသောမိန်းမ၊
(၁၆) သြဘဋ စုမ္ဗဋာ- ခေါင်းခုကိုချ၍ လင်မယားအဖြစ်နေသော မိန်းမ၊
(၁၇) ဒါသီ စ ဘရိယာ စ- ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သောမိန်းမ၊
(၁၈) ကမ္မကာရီ စ ဘရိယာ စ- အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သော မိန်းမ၊
(၁၉) ဓဇာ ဟဋာ- စစ်မြေပြင်မှ ဆောင်ယူခဲ့သောမိန်းမ၊
(၂၀) မုဟုတ္တိကာ- တစ်ခဏ္ဏမျှ ပေါင်းဖေါ်ရန် ငှားရမ်း ထားသော ခေတ္တမယားဖြစ်သူမိန်းမ။
မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းင်း ၁၂-ယောက်သောမိန်းမများကို သွားလာလွန်ကျူးခဲ့မူ လင်ရှိ မယားဖြစ်၍ မိန်းမရော ယောက်ျားပါ နှစ်ဦးစလုံး ကံထိုက်သည်ဟူ၏၊ အကျယ်ကို လိုမူ ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဋီကာ။ အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာ မူလဋီကာမှာ ရှုပါလေ။
မယားခိုး အပြား ၇-ပါး။ ။မယားခိုးမှု စီရင်ရာ၌ မနုဓမ္မသတ်အလို အောက်ပါ ခုနှစ်ပါးကို ပြသည်။
(၂) ဃရ ပတ္တလင်မရှိခိုက် အိမ်သို့ သွားယောက်ခြင်း၊
(၃) ဂုယှဋ္ဌာန-လုံခြုံသောအရပ်၌ ကာမနှင့်စပ်သောစကားတို့ကိုဆိုခြင်း၊
(၄) သလ’ာပ-ကာမဂုဏ်ဖြင့် ဖြောင်းဖြပြောဆိုခြင်း၊
(၅) သေနိ-တင်းတိမ်çခြင်ထောင်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း၊
(၆) ဒွါရ-တိုက်တံခါးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း၊
မေထုန် ၂-ပါး၊ မျိုးအပြား၊ ခွဲခြား မိန့်ဆိုဘိ။ ။
(၁) မေထုန်ကြီး-မိန်းမ ယောက်ျား ကာယကံမြောက် အင်္ဂါဇာတ် အချင်းချင်း သွားလာမှီဝဲခြင်းမျိုး၊
(၂) မေထုန်ငယ်- မိန်းမ ယောက်ျား ရသေ့ စိတ်ဖြေအားဖြင့် ကိုယ်လက်သုံးသပ် ပြုမူသာယာမှုမျိုး။
မေထုန် ငယ် ၇-ပါး။ ။သတ္တင်္ဂုတ္တရ။ပါ။ ၄၃၈။ဋ္ဌ။ ၁၆၇-၌ အကျယ်ရှု။ အဗြဟ္မစရိယ သိက္ခာပုဒ်တော်၏ ညှိုးနွမ်း ပေါက်ကြားမှုမျိုး ၇-ပါး၊ မိန်းမ ယောက်ျား ၂-ဦးလုံး အတွက် အပြန်အလှန် ယူရမည်။
(၁) မာတုဂါမ၏ ပွတ်တိုက်ဆုပ်နယ်နှိပ်ပေးမှု၌ သာယာခြင်း၊
(၂) မာတုဂါမနှင့် ပြုံးကာ ရယ်ကာ တို့ကာ ဆိတ်ကာ နေရသည်ကို သာယာခြင်း၊
(၃) မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ အားပါးတရ ကြည့်ရှုနေရမှုကို သာယာခြင်း၊
(၄) မျက်ကွယ်ရာ အနီးအနားက ၎င်းင်းတို့၏ ပြောသံ ဆိုသံ ရယ်သံကိုကြား၍ သာယာစွာ နားစိုက် ထောင်ခြင်း၊
(၅) ရှေးအခါက မာတုဂါမနှင့် ပျော်ပျော်ကြီး ပြုမှုနေထိုင် ကျင့်ကြံမှု မျိုးစုံကို တွေးတော အောက်မေ့ သာယာခြင်း၊
(၆) သူတပါးတို့ ပြုမူကျင့်ကြံ ခံစားနေမှုကိုမြင်ရ၍ သာယာခြင်း၊
(၇) ယခု ဘ၀ ဉပစုအားထုတ်ရသော သီလကုသိုလ်ကြောင့် နောက်ဘ၀၌ နတ်မင်းကြီး ဖြစ်ပြီး နတ်သမီး နတ်သားများစွာတို့နှင့် ပျော်ပါးရန် မြှော်လင့် လျက် သာယာနေခြင်း။
မေထုန် မမှီဝဲ အပ်သော မိန်းမ ၁၄-ပါး။ ။ထို ဆယ့်လေးယောက်တို့တွင် အချို့ ကား ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေ၍ အချို့ကာ ဘာသာတရားနှင့် လောက၀တ် ဥပဒေများက တားမြစ်၍ အပြစ် ရှိသည်၊
အမရိတ ဘေသဇ္ဇကျမ်းမှ၊ ဥတုလာနေသူ၊ အလိုမရှိသူ၊ ညစ်နွမ်း မသန့်စင်သူ ၊ မချစ်ခင်သူ၊ ပြည့်တန်ဆာမ၊ အရွယ်ကြီးရင့်သူ၊ ရောဂါသည်မ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မ၊ ရန်သူမ၊ အင်္ဂါဇာတ်၌ အနာရှိသူ၊ လင်ရှိသူ ၊ မာတုရက္ခိတ စသည်ရှိသူ၊ သီလရှင်မ။ (မိမိရဲ့ ဇနီးသည်ပင် ဖြစ်စေကာမူ ထို ၁၄ယောက် စာရင်း ၀င်နေလျက် မေထုန် မှီဝဲသော် ကာမေသု မိစာ စာရကံ ထိုက်သည်ဟုလည်း မှတ်သား ဖူးပါသည်။
မေထုန် မှီဝဲလွန်မှု အပြစ် ၈-ပါး။ ။ကာမသျှတြကျမ်း ။ (၁) ဘုန်းကံ ယုတ်လျော့ခြင်း ၊ (၂) ဉာဏ်ပညာ ယုတ်လျော့ခြင်း၊ (၃) ခွန်အားဗလ ယုတ်လျော့ခြင်း၊ (၄) အသား၊ အရေ၊ ဦးခေါင်း ပူလောင်ခြင်း၊ (၅) အရောင် အဆင်း ဖျော့တော့ ပျက်စီးခြင်း၊ (၆) ချောင်းဆိုး သွေးပါ အဆုပ်နာ
မြစ်ချောက် ရောဂါ စွဲကပ် တတ်ခြင်း၊ (၇) အပြင်အပရောဂါလွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်ခြင်း၊ (၈) အသက် တိုခြင်း။
မုသာဝါဒ အင်္ဂါ ၄-ပါး။ ။လူများ မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ် ပျက်စီးခြင်းအင်္ဂါ ၄-ပါး၊ ၎င်းင်း အင်္ဂါ၎-ပါးနှင့်ပြည့်စုံမှ သိက္ခာပုဒ်ပျက်သည်။
(၁) အတထ- မမှန်သော ၀တ္ထု၊
(၂) ၀ိ သံဝါဒ စိတ္တ- မှားယွင်းစေလိုသော စိတ်၊
(၃) တဇ္ဇ ၀ါယမ ထိုစိတ်အားလျှော်သော ကိုယ် နှုတ် လုံ့လဉပခြင်း၊
(၄) တဒတ္ထ ဇာနန- သူလိမ်တိုင်း သိရှိ ယုံကြည်ခြင်း။
မုသာဝါဒကံရဲ့ မကောင်းကျိုး ၁၆-ပါး။ ။မဟုတ်မမှန် လိမ်ညာ ပြောသူတို့ရရှိ ခံစားရသော အပြစ်မျိုး ဆယ့်ငါးပါး ဟူ၏၊ ခုဒ္ဒကပါဌ အဋ္ဌကထာမှ။
(၁) မကြည်ညိုဖွယ်ရာ ရုပ်ဆင်းရှိခြင်း၊
(၂) သွား မညီမညွတ် ရှိခြင်း၊
(၃) နား မချမ်းသာသော အသံ ရှိခြင်း၊
(၅) ပိန်လွန်း သေးလွန်းခြင်း၊
(၆) နိမ့် ပုလွန်းခြင်း၊
(၇) မြင့် ရှည်လွန်းခြင်း၊
(၈) ကြမ်းတမ်းသော အသားအရေ ရှိခြင်း၊
(၁၀) ဆွံ့အ တုန်လှုပ်ခြင်း၊
(၁၂) တိုသော လျှာ စကားမပြီ ရှိခြင်း၊
(၁၄) မိုက်မဲ တွေဝေခြင်း၊
(၁၅) ဉာဏ် ပညာ နည်းပါးခြင်း၊
အရက်သောက်ခြင်းအပြစ် ၆-ပါး။ ။ သုတ်ပါထေယျ။ ပါ။ ၁၄၈။ ဋ္ဌ။ ၁၂၇။ ဤ၌ မျက်မှောက် လောက ပြစ် ၆-ပါးကို ဖြေဆိုလိုက်သည်၊ သံသရာ ပြစ်လည်း ကြီးလေးလှ၏။
ဥစ္စာယုတ်ခြင်း၊ ငြင်းခုံများစွာ၊ ရောဂါထူပြော၊ ကျောစောမဲ့တုံ၊ မလုံ အင်္ဂါ၊ ပညာ နည်းရှား၊ ဤ ၆- ပါးကား၊ သောက်စား သေစာ အပြစ်တည်း။
အရက်မျိုး ၅-ပါး။ ။ လူမပြုသော်လည်း အလိုအလျောက် ဖြစ်နေ တတ်သော မေရယခေါ် အရက်မျိုး ငါးပါး။ (၁) ပုပ္ဖါသ၀- သစ်ပွင့်ရည်မှဖြစ်သောအရက်၊
(၂) ဖလာသ၀- သစ်သီးရည်မှဖြစ်သော အရက်၊
(၃) မဓွာသ၀- မုဒရက်ရည်မှ ဖြစ်သော အရက်၊
(၄) ဂုဠာသ၀- ကြံရည်မှ ဖြစ်သော အရက်၊
(၅) သမ္ဘာရသံယုတ္တ- အရက်ဖြစ်ကြောင်း ၀တ္ထုပေါင်းတို့ စုပေါင်း၍ ဖြစ်သော အရက်။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 5:44 AM 1 comment:
ဗုဒ္ဓံ၊ ဓမ္မံ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပါဘုရား
ဗုဒ္ဓ သာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု
ပိဋကတ်သုံးပုံကို သာသနာအားဖြင့် ၃-ရပ် ခွဲထားသည်။
(၁) ယထာပရာဓ သာသနာ- အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်အလျောက် ဆုံးမ ပညတ်သော ၀ိနည်း ပိဋကတ်တော်၊
(၂) ယထာ နုလောမာ သာသနာ- ထိုထို သတ္တ၀ါ တို့၏ အလို အဇ္ဈာသယ အားလျော်စွာ ဟောကြား ဆုံးမတော် မူအပ်သော သုတ္တန် ပိဋကတ်တော်၊
(၃) ယထာ ဓမ္မသာသနာ- အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ၊ ရေ၊ မြေ၊ တော၊ တောင် ဟူသမျှ တို့သည် ပရမတ္ထ ဓမ္မ အစုသာ ဖြစ်ရကား ရုပ် နာမ်အားလျော်စွာ ဟောကြား ဆုံးမတော် မူသော အဘိဓမ္မာ ပိဋကတ်တော်။
သာသနာအပြား မျိုး ၃-ပါး။ ။
။ပါရာဇိကဏ် ။ဋ္ဌ။ ပ-အုပ် ၁၇-နှင့် သုတ် သီလက္ခန် ။ဋ္ဌ။ ၂၀-၌ သာသနာ ၃-ရပ် ကိုပါ အကျယ် ပြထားသည်။ ဆုံးမခြင်း အပြား သုံးပါးဟူ၏၊ ဤကား ခုခေတ်သုံး တည်း။
(၂) ပဋိပတ္တိ သာသနာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ အားထုတ်မှု၊
(၃) ပဋိဝေဓ သာသနာ-မဂ် ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်တရားမှန်ကို သိမှု။
သာသနာ့အ့အမွေမျိုး ၂-ပါး။ ။မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသ။ပါ။ ၁၅ ။ဋ္ဌ။ ပ-အုပ်။ ၉၄။
(၁) အာမိသ ဒါယာဒ- ဆွမ်း၊ သင်္ကန်း၊ ကျောင်း၊ ဆေး၊ ပစ္စည်း ၄-ပါးအမွေခံ၊ (၂) ဓမ္မ ဒါယာဒ- လောကုတ္တရာ အမွေခံ၊ တရား အမွေခံ ကိုသာ ဘုရားရှင် လိုလားသည်။ မှတ်ချက်။ ။နံပါတ် ၂-၌ မင်္ဂ ဖိုလ် ရကြောင်း ၀ိပဿနာ တရား ပွားများ အားထုတ်မှု၊ ၀ိပဿနာ ဓုရကို ဆိုသည် မှတ်ရာ၏။
အံ့ဖွယ် ရှစ်ဖြာ သာသနာ ရောင်ဝါ နေသို့ ထွန်းစေသော်ဝ်
သုတေသန ဖွင့်ဆို ရှင်းပြ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဘိဓာန်
တန်ခိုးပြခြင်းသည် အဓိကမဟုတ်ပါ (1)
ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှ ပြုပြင်ဖွယ်ရာများ (1)
ငါးပါးသီလ ကံမြောက်ကြောင်း အချက်များနဲ့ ကျူးလွန် ခြ...